सलमानको ‘अन्तिम’ दशैंमा
बलिउड दबंग स्टार सलमान खानको चलचित्र ‘अन्तिमः द फाइनल ट्रुथ’ निकै महत्वाकांक्षी मेघा प्राजेक्ट हो । चलचित्र दशैंका बेलामा रिलिज हुने बताइएको छ ।
सलमान र बिगबोसमा के छ समानता ?
बलिउडका अभिनेता सलमान खान बिगबोस शोमा व्यस्त छन् । बिगबोसले अहिले १५ औं संस्करणमा यात्रा शुरू गर्न लागेको छ । बिगबोस १५ को लन्च कार्यक्रममा सलमान खानलाई एक प्रश्न सोधिएको थियो, उनी र बिगबोसमा के समानता छ ? जवाफमा सलमानले बताएका थिए दुवै अविवाहित छन् । सलमानले अझै स्पष्टीकरण दिएका छन् की, हामी दुवै अविवाहित छौँ जसका कारण बिन कसैको डर वा हस्तक्षेप नै आफूलाई बोस मानेका छौँ । बिगबोस १५ अर्को महिनाको २ तारिखदेखि शुरू हुने बताइएको छ ।
मुम्बई(एबीपी लाइभ)– बलिउडका ‘दबंग’का रुपमा परिचित अभिनेता सलमान खान फ्यानका मनपर्ने स्टारमध्ये एक हुन् । सलमानको बलिउड यात्रा ३३ वर्ष पुरा भएको छ । मानिसहरु उनको अनुहार हेर्न घण्टौं पर्खन्छन् । तर एक समय थियो, जुन बेला सलमानलाई फिल्ममा एउटा सानो भूमिका पाउनका लागि घण्टौं लाइनमा लाग्नुपथ्र्यो । त्यो समयमा उनलाई कसैले चिन्दैन थिए । […]
‘टाइगर ३’मा सलमानको फेरिएको लुक्स
मुम्बई(जीन्यूज)– अभिनेता सलमान खानले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘टाइगर ३’को सुटिङ सुरु गरेका छन् । यो फिल्म ‘एक था टाइगर’को फ्रेञ्चाइजी हो । केही दिनअघि मात्र यो फिल्मको सुटिङ सेटबाट सलमानका कैयौं लुक्स लिक भएका छन् । तस्वीरमा सलमानलाई चिन्न जोकोहीलाई मुस्किल नै पर्छ । सलमानले फिल्मका लागि आफ्नो हुलिया पूर्ण रुपमा परिवर्तन गरेका छन् । […]
‘टाइगर ३’ मा यस्तो छ सलमानको लुक्स
अभिनेता सलमान खान अहिले रसियामा छन् । फिल्म ‘टाइगर ३’ को सुटिङका लागि उनी शुक्रबार त्यहाँ पुगेका हुन् । २०१२ मा रिलिज हिट फिल्म ‘टाइगर’ को तेस्रो सिक्वेलको रुपमा यो बन्न लागेको हो । सलमानको रसिया सुटिङ सेटबाट फिल्मका केही तस्बिर अहिले बाहिर आएको छ । जसमा सलमान सुनौलो रंगको दाह्री, जुँगा र कपालमा विदेशी नागरिक झै देखिएका छन् । उनको दाह्री, जुँगा र कपाल निकै लामो देख्न सकिन्छ ।सलमान अघिल्लो दुई सिक्वेल झै यो फिल्ममा पनि ‘र’ एजेन्टको भूमिकामा देखिँदैछन् । फिल्ममा
एजेन्सी, ७ साउन । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई अहिले केही प्रोजेक्टको लाइन लागेको छ । ति मध्ये एउटा हो फिल्म ‘टाइगर ३’ । यो फिल्ममा क्याट्रिना कैफ पनि सलमानसँगै देखिदै छिन् । अब भने सलमान खान यस फिल्मको तयारीमा लागेका छन् । सलमानले एउटा भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गरेका छन् । भिडियोमा उनले जिममा वर्कआउट […]
‘टाइगर ३’ को तयारीमा सलमान खान, यस्तो बनाए शरीर
बलिउड अभिनेता सलमान खान अहिले ‘टाइगर ३’ को तयारीमा जुटेका छन् । यसका लागि सलमानले आफ्नो शरीरलाई तयार गरिरहेका छन् । हालै उनले जिममा वर्कआउट गरेको भिडियो शेयर गरेका छन् । यसमा तपाईं सलमानको शरीर देखेर दंग पर्नु हुनेछ । View this post on Instagram A post shared by Salman Khan ...
सलमानसँग केआरकेले मागे माफी
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म राधेको नकारात्मक समिक्षाका कारण चर्चामा आएका समिक्षक कमाल आर खान (केआरके)ले सलमानसँग माफी मागेका छन्। केआरकेले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमा आफूले सलमानसँग सम्बन्धित सबै भिडियोहरु डिलिट गरेको बताउँदै आफ्नो उदेश्य सलमानलाई भावनात्मक रुपमा ठेस पुर्‍याउनु नरहेकोसमेत बताए। केआरकेले अदालतमा सलमानविरुद्ध मुद्धा लड्न भने नछोड्ने बताए। उनले अदालतले आदेश दिएमात्रै सलमानको फिल्मको समिक्षा गर्नेसमेत बताए।
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सलमान खानले अब फिल्मको कथामा जोड दिने बताएका छन् । सलमानको एक्सन हुनसाथ फिल्म चल्ने भन्ने मान्यता पछिल्ला फिल्मले तोडेपछि अब उनले कथालाई महŒव दिने बताएका छन् । यस अघिको आफ्नो फिल्म बजरंगी भाइजन पछि राम्रो कथामा फिल्म नबनेको प्रतिक्रिया यी अभिनेताले स्विकारेका छन् । उनको फिल्म ट्युबलाइटदेखि पछिल्लो फिल्म राधेसम्मले […] The post सलमानले कथामा जोड दिने appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Dainik.
सलमानको बडी डबल बनेर चर्चामा आए परवेज काजी, बताए कति छ तलब
सलमान खान स्टारर रिलिज फिल्म राधे, पछिल्लो केही दिनदेखि सोसm मिडियामा चर्चामा छ । सलमानको यो फिल्ममा बडी डबलको पनि प्रयोग गरिएको छ । सलमानका बडी डबल परवेज काजीले सोसल मिडियामा सलमानसँग सेटका केही तस्बिर सेयर गरेका छन् ।परवेज काजी सलमान जस्तै देखिने भएकाले निकै चर्चित छन् । थुप्रै फिल्ममा उनले सलमान खानको बडी डबलको भूमिका निभाइसकेका छन् । हालै परवेजले सोसल मिडियामा सलमानसँग मिल्दोजुल्दो पहिरन लगाएको तस्बिर सेयर गरेका छन् । परवेजको यी तस्बिरलाई सलमानका प्रशंसकले निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छन
सलमानकी बहिनीहरू अर्पिता र अलवीरा कोरोना संक्रमित
अभिनेता सलमान खानको दुबै बहिनी अर्पिता खान र अलवीरा अग्नीहोत्री कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् । उनीहरु कोरोना संक्रमित भएको सलमान खान आफैले एक अन्तर्वार्तामा बताएका थिए ।सलमानले आफ्नो बहिनीहरूमा कोरोना भएको जानकारी दिदै उनीहरुमा कुनै लक्षण समेत नभएको बताए ।‘गत बर्ष कोरोना भएको सुन्न मात्र मिलेको थियो’ सलमानले भने ‘यो बर्ष घरका सदस्य र नजिकका ब्यक्तिलाइ कोरोना भएको छ ।’ सलमानले कोरोनाको दोस्रो लहर निकै खतरनाक भएको समेत सुनाए ।सलमानकी बहिनी अर्पिताले २०१४मा आयुुष शर्मासँग विव